डा. देवकोटाको आयुर्वे्दिक उपचार सुरु
Posted: 2018-05-11 13:32:25
वरिष्ठ न्यरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको आयुर्वे्दिक पद्धतिबाट उपचार सुरु गरिएको छ। पित्तथैलीमा समस्या आएपछि पाँच महिनाअघि देवकोटा बेलायतस्थित किङ्स कलेज अस्पतालमा उपचारका लागि गएका थिए। डा देवकोटाको आयुर्वे्दिक उपचार वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक ऋषिराज कोइरालाले गराइरको उनका भतिजा वसन्त देवकोटाले बताए। देवकोलाई पित्तथैलीमा क्यान्सर भएको पुष्टि भएपछि दुईपटक सम्म केमोथेपारी दिइएको थियो। देवकोटाको उपचार बेलायतमा सम्भव नभएपछि डा देवकोटाको इच्छामा थप उपचार स्वदेशमै गर्ने गरी गत वैशाख १५ गते नेपाल फर्किएका थिए। डा देवकोटाका भतिजा वसन्त देवकोटाकले बासबासीस्थित न्युरो अस्पतालका भीआईपी क्याबिनमा राखेर उनको उपचार भइरहेको जानकारी दिए।